‘मन पोलिरहेको छ…रद्द गरिदिन्छु’ « Janata Samachar
‘मन पोलिरहेको छ…रद्द गरिदिन्छु’
काठमाडौैं २ लाई १ अर्ब १५ करोड
प्रकाशित मिति : 8 November, 2019 5:39 pm
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सबै तहसम्मको एकीकरण छिट्टै टुंग्याउनु पर्ने बताउनुभएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले शुक्रबार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ को विकासनिर्माण योजनाबारे जनप्रतिनिधिसँगको वृहत् छलफलमा सबै तहको एकीकरण नटुंगिदा पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध घनिभूत हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘चाहेका भए सबै तहको एकीकरण एक महिनामै गर्न सकिन्थ्यो तर एकता अहिलेसम्म टुंगिएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै तहको एकता टुंगिएपछि हामीले २ वटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो स्थानीय तहसम्म संगठन परिचालन, दोस्रो जनताका विभिन्न समस्यासँग जोडिएका काम जतिसक्दो छिटो गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन । पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध घनिभूत पार्नुपर्छ । पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै हुनुपर्छ । विकास निर्माण कार्य योजनावद्ध बनाउन स्थानीय तहसम्म नै कमिटीको आवश्यकता पर्दछ ।’
वरिष्ठ नेता नेपालले चाबहिल–साँखु सडक निर्माण कार्य छिटो गर्न आफूले सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार घच्घच्याइरहेको स्मरण गराउनुभयो । ‘चाबहिल–साँखु सडक निर्माणका लागि हिड्दा–हिड्दा जिउ थिलोथिलो भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ ६ पटक मन्त्रीलाई बोलाइयो । मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरियो । संसदमा पनि बोलेँ । अब के गर्नू कुट्नु ? अब एउटा काम बाँकी छ, त्यो हो धर्ना जुलुश गर्ने । धर्ना र जुलुश गर्यो भने सञ्चार माध्यमले फेरि माधव नेपालले ओली सरकारविरुद्ध जुलुश निकाल्यो भन्लान् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले चाबहिल–साँखु सडक विगतमा भन्दा निकै सुधार भएको बताउनुभयो । ‘काम हुँदै नभएको होइन, पहिलाको तुलनामा राम्रो हुँदै गएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हिड्नै नहुने अवस्थाको सडक अहिले हिड्न मिल्ने भएको छ । पहिला पीच नभएको ठाउँमा अहिले पीच भएको छ । तर पीचबाट हिडिरहेको बेला कुनैकुनै ठाउँमा हिलो र खाल्डोमा पर्दा दाँतमा ढुंगा लागे जस्तै हुने ।’
वरिष्ठ नेता नेपालले मुआब्जा विवाद र विद्युत पोलको कारण सडक निर्माणमा ढिलाई भइहेको सुनाउनुभयो । ‘सडक किन अहिलेसम्म पीच गर्नुभएन ? भन्दा ठेकेदारले पोल नहटाउँदा काम गर्न मिलेन भन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि मैले पोल हटाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई समेत फोन गरेको छु । त्यस्तै मुआब्जा विवादले पनि समस्या भएको छ । मुआब्जाको पैसा आयो विभिन्न कारणले वितरण हुँदैन ।’
निर्धारित समयमा तोकिएको काम नगर्ने ठेकेदारलाई अब कारबाही हुने चेतावनी समेत दिनुभयो । ‘लगातार खटिरहँदा पनि सडक निर्माण कार्य छिटो नहुँदा मन पोलिरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘काम नगर्ने ठेकदारलाई कारबाही गर्नुपर्छ । काम नगर्नेको ठेक्का रद्द गरिदिन्छु ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र आउँदो वर्षको लागि विभिन्न शीर्षकमा करिब १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको योजना प्रस्ताव गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभयो । नेता नेपालले परेका योजना पारदर्शीढंगले सम्पन्न गराउने कार्यमा जुट्न स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेता तथा कार्यकर्तालाई आव्हान समेत गर्नुभयो । ‘जनताबाट केही पनि भएन भन्ने गुनासो नआओस्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘काम गुणस्तरीय होस्, भ्रष्टाचार सुन्न नपरोस् ।’